‘Mooyyaleetti Namoota 143 Adda Baafnee Mallatoo Dhibee kooronaa Irratti Ilaalaa Jirra’ – Hospitaala Mooyyalee
Ebla 14, 2020
Hospitaalli Mooyyalee lammilee biyyoota ollaa dhiyeenya oldeebi’an adda baasee mallatoo dhibee Koorona akka irratti ilaalaa jiru ifoomse.
Dr. Alii Galgaloo Diirekterri hospitaalichaa kanaan duras godaantonni biyyoottan ollaa ofirra deebifaman torbee lamaaf adda baafamanii ilaalamaa erga turaniin booda gara maatii isaaniitti deebi’uu dubbatan. Namoota kanaaf garuu nyaata dhiyeessuun rakkoo akkaa tahe himanii jiru.
Erga dhibeen Kooronaa Mullatee namoota naannoo dhibeen kun mullate jedhamerraa dhufan jedhaman 200 ol torbee lamaaf adda baasee qorannoo taasisee jira jedhan dabalataan. Ammaan kanas namootni 143 mana barnootaa sadarkaa tokkofaa Mooyyaleetti adda baafamanii torbee lamaaf ilaalamaa akka jiran himaniiru. Haga yoonaattis namoota biyyaan ala turanii dhufanii dhibee kanaan shakkaman 12 qorannaan laaboraatoorii taasifameefii dhibee kanarraa bilisa ta’uu adda baafnee jedhan.
Dookter Aliin warri biyya ollaa keessumaa Keeniyaa keessa hidhaa turee deebiwu kanaaf nyaata isaaniif dhiyeessuunis rakkoo tahuu himan. Dhaabbati godaantotaa IOM gargaarsa taasisaa jiraatus, warren Mana Barnootaa Sadarkaa tokkoffaa Mooyyalee keessa jiru kana gargaaruun humnaa ol ta’aa dhufeera jechuun dabalataan dubbatanii jiran.
Mooyyale malees aanolee godina Booranaa daangaarra jiran; warreen akka Aanaa Mi’oofaa mara keessatti bakki warri reefuu gara biyyaa dhufan adda bahanii turanis qophaa’ee akka jirullee dubbatanii jiru.
Jiraattonni Mooyyale garuu ammas Sodaa qabnaa jedhu. Abduuba Waaqo jiraataa Mooyyale. Abduubi; daangaan banaa ta’uu, namuu Gaambo akka fedhe dhaqe bitataa akka jiru, of eeggannoon gahaan hawaasa keessa akka hin jirree daranii himan. Mootummaan tarkaanfii malu fudhatuu baannaan rakkoon as nutti adeemtii jedhu. Omar Waaqoo itti Aanaan Kantiibaa magaalaa Mooyyale; lammileen biyyaa biyyoota ollaa keessatti hidhamanii turan ka amma biyyatti deebi’aa jiran qoratanii seensisuun itti fufaa jedhan. Ammas mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Mooyyale keessatti namootni adda baafamanii ogeessi fayyaa isaan ilaalaa jira jedhan. Jiraattonni magaalattii Mooyyaleen waloon ka bulchan naannoon shanii fi afur dhimma dhibee kanarratti waliin hojjetaa hin jiran komii jedhuuf, ‘haga dandeenye waliin hojjechuuf yaalaa jirraa’ jedhan.
Hanqina nyaataa bakka namootni adda baafaman mudataa jira jedhameefis mootummaan haga danda’e gargaarsa dhiyeessaa jira jedhanii, nami qaamaan akka walirraa fagaatuufi labsiiwwan darban hojiitti hiiksisuun garuu yeroo fudhachuu malaa jedhan.
Diirekterri hospitaala Mooyyalee ammas gareen godaantota Itiyoophiyaa dhiyeenya manneetii hidhaa adda addaarraa hiikaman Keeniyaa gara mooyyalee dhufaa akka jiran Eembasiin Itiyoophiyaa Naayroobii jiru warra daangaa eegan beeksisuusaa ifoomsanii jiru.
WBOn Zoonii Lixaa Ajjeechaa Hojjetoota Dhaabbata Amantii Irratti Raaw'aame Keessaa Harka Hin Qabu, Jedhe
Kameeruun Haguuggii Afaannii Fi Funyaanii Godhachuun Dirqii Ta'uu Labsite
Vaayiresiin Koronaa Haadholiin Itiyoophiyaa Mana Keessatti Akka Da’an Dirqiseese
Amerikaan Jalqaba Baatii Dhufuutti Jireenya Lafa Duritti Deebisuu Hin Qabdu: Dr. Antonii Faawuchi
Speen Hanga Tokko Foyyee Qabdi